May 2020 – " कञ्चनजंगा News "
दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको फाइनलमा, भोटिङ खुल्ला
No Comments on दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको फाइनलमा, भोटिङ खुल्ला
काठमाडौं । नेपाली युवक दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप ५ मा प्रवेश गरेका छन् । टप ५ को घोषणासँगै उपाधिका लागि भोटिङ खुल्ला भएको छ । दिवेशले अब उपाधिका लागि फाइनल राउन्डको प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल राउण्ड पनि सुरु भइसकेको छ । यसमा प्रत्येक
प्रतियोगीले दुई–दुई वटा प्रस्तुति दिनेछन् । साथै दुई घन्टासम्म भोटिङ खुल्ला राखिने छ । सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने अमेरिकन आइडल घोषणा हुने छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अमेरिकन आइडलको फाइनलमा सबैले आ–आफ्नो घरबाटै प्रस्तुति दिइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै फैलिइरहेको छ !
काठमाडौं । घटना १ : बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी २९ वर्षीया महिलाको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयले शनिबार साँझ घोषणा गर्‍यो । उनी ९ दिनकी सुत्केरी थिइन् । कोभिड–१९ का कारण नेपालमा भएको यो पहिलो मृत्यु समेत हो ।
तीन महिनाअघिसम्म बालाजुमा तरकारी पसल चलाउने उनी पछिल्लो समय व्यवसाय छाडेर टोखामा बस्दै आएकी थिइन् । २३ वैशाखमा व्यथाले च्यापेपछि आफन्तले त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज लगे र वैशाख २४ गते छोरा जन्मियो । २५ गते डिस्चार्ज दिएपछि उनलाई सिन्धुपाल्चोक लगियो । गाउँ लगेको केही दिनमै स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई बाह्रबिसे प्राथमिक उपचार केन्द्रमा लगियो । त्यहाँबाट स्वास्थ्यकर्मीले धुलिखेल रिफर गरे । तर, छोराको न्वारान गरेर मात्र जाने भन्दै उनीहरू घर फर्किए ।
त्यहीबेला शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत बालिकामा कोरोना संक्रमण भएको खबर सार्वजनिक भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सोधीखोजी गरेर उनीहरूलाई तत्काल अस्पताल लैजान सुझाए । परिवारले एम्बुलेन्स खोजेर बिहीबार साँझ ९ः३० बजे धुलिखेल अस्पताल ल्याए । तर, त्यसको आधा घण्टामा नै चिकित्सकले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरे ।
परीक्षणका क्रममा उनलाई कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । हुन त कन्ट्याक ट्रेसिङको क्रम चलिरहेकाले उनमा देखिएको संक्रमणको स्रोत बताइएको छैन । शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितबाट ती सुत्केरी महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना नभएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दास बताउँछन् ।
सयाौंको स्वाब संकलन गरिँदै
No Comments on सयाौंको स्वाब संकलन गरिँदै
काठमाडौं : कोरोना भाइरसबाट धुलिखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सुत्केरीको उपचार गराउने क्रममा उनी बसेको टोखा नगरपालिका गोंगबुस्थित डेरामा सिल गरिएको छ। सम्पर्कमा आएका नातेदार, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सयौं व्यक्तिको स्वाब संकलन कार्यलाई तीव्रता
दिइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी र सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिको स्वाब संकलन गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताए। उनी अस्थायी रूपमा बसेको टोखा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका आफन्तको स्वाब संकलन गर्नुका साथै घर माइती गाउँमा पनि सिल गरिएको छ। टोखा नगरपालिका-९ मा डेरा लिएर बसेको पाइएपछि कन्ट्याक्ट टे«सिङलाई तीव्र पारिएको छ। सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसे-९, राम्चेकी २९ वर्षीया ती महिलाको कोरोना भाइरसका कारण बिहीबार राति निधन भएको थियो।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार ती महिला वैशाख २३ गते महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। वैशाख २४ गते नर्मल डेलिभरी भएको थियो। २५ गते डिस्चार्ज भएकी थिइन्। त्यसपछि उनी सिन्धुपाल्चोकस्थित घर गएकी थिइन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको संयोजकत्वमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य अघि बढाइएको डा. देवकोटाले बताए। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कम्युनिटी मेडिसिन युनिट र सिन्धुपाल्चोक एवं धुलिखेल अस्पतालका लागि धुलिखेल अस्पतालको कम्युनिटी मेडिसिन युनिट अग्रसरतामा ट्रेसिङलगायत कार्य गरिनेछ। ‘आइतबारदेखि नमुना संकलन कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने।आइतबार गोंगबु, माछापोखरीलगायत क्षेत्रका झन्डै चार सय व्यक्तिको परीक्षण गर्ने जनाइएको छ। एक सय ५० जनाको पीसीआर र दुई सय ५० जनाको आरडीटीबाट परीक्षण गर्ने योजना रहेको डा. देवकोटाले बताए।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार मृतकको धेरै ठाउँमा सम्पर्क रहेकाले अन्यलाई पनि कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको छ। विभागबाट विज्ञसहितको चिकित्सकीय टोली सिन्धुपाल्चोक पठाइएको छ। ‘धेरै ठाउँमा गएको पाइएकाले सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सयौं व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने।मृतक महिलाको घर, माइतीका साथै धुलिखेल अस्पताल र सुत्केरी भएको शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको स्वाब संकलन भइरहेको उनले बताए। आइतबार ४७ जनाभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा डेरा सिल गरी सम्पर्कमा आएका सबैको पहिचान गर्ने क्रम जारी छ।
टोखा नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार पाण्डे थरका व्यक्तिको घरमा डेरा लिएर बसेकाले घरधनीको पनि स्वाब संकलन गरिएको छ। त्यस्तै, तरकारी खरिद गर्न गएको तरकारी पसलेको पनि स्वाब संकलन गरिसकिएको छ। लकडाउनका बेला राहत लिन उनी टोखा नगरपालिका-९ नं वडाका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट भएको पनि समेत मेयर अधिकारीले बताए।वडा महिला सदस्य जगतमाया महर्जनले स्वयंसेवकसहित मृतक बस्ने डेरामा पुगेर राहत फर्म भराएको पाइएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्दै फर्म भराइएको थियो। शिक्षण अस्पतालमा सुत्केरी भएपछि भिनाजु नाता पर्ने बोधराज पराजुलीलगायतले सहयोग गरेको पाइएको छ।
‘सुत्केरी भएपछि खाना पु¥याउने कार्यमा सहयोग गर्ने भिनाजुलगायत व्यक्ति र जनप्रतिनिधिको स्वाब संकलन भइसकेको छ,’ मेयर अधिकारीले भने। संकलित स्वाबलाई पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ।
लिम्पियाधुरासहितको नक्सा मन्त्रिपरिषदमा
No Comments on लिम्पियाधुरासहितको नक्सा मन्त्रिपरिषदमा
काठमाडौं : सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा बनाएर मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारवणमन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ
नक्सासहितको प्रस्ताव लगेकी हुन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। घोषणा गरेको दुई दिनमा सरकारले यो नक्सा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको हो। नापी विभागद्वारा तयार पारिएको लिम्पियाधुरासहित भूमि समेटिएको नक्सा बनाएर मन्त्रालय मन्त्रिपरिषदमा पारित भएमा सोमबार सार्वजनिक हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यो नक्सा बनेसँगै भारतले अतिक्रमण गरेका गुन्जी, नाबी, कुटी लगायतका स्थान नेपालको नक्सामा समेटिने छन्। भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक र कालापानी अहिलेको नेपालको नक्सामा छ। नेपाली भूमि कालापानीमा ६० वर्षदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ।
भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो। यसअघि सरकारलाई संसदीय समितिले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
वैशाख १६ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो। भारतलाई त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ।